पाकिस्तानले जासूसी गर्न पठाएको तालिमप्राप्त परेवा भारतको नियन्त्रणमा ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/पाकिस्तानले जासूसी गर्न पठाएको तालिमप्राप्त परेवा भारतको नियन्त्रणमा !
एजेन्सी । भारतको अहिले कुनै पनि छिमेकी देशसंग राम्रो सम्बन्ध छैन । नेपालको सिमाना मिचेर सडक निर्माण गरि उद्घाटन समेत गरिसकेको भारतको चिनको सिमानामा पनि तनाव छ । दुवै देशमा सुरक्षाकर्मी एक अर्कासंग विवाद गरिरहेका तस्बिर र दृष्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । पाकिस्तान लगायतका अन्य देशसंग झन दुस्मनकै नाता रहेको भारतले एउटा परेवालाई पाकिस्तानको जासुस भन्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । भारतको काश्मिरको कटुवा जिल्लामा पाकिस्तानी जासूस भएको आशंकामा परेवा पक्राउ गरिएको हो । स्थानिय गितादेवीको घरमा भेटिएको सो परेवालाई पाकिस्तानको जाजुस भएको आशंका गरिएको छ । सो परेवा स्थानियले प्रहरीलाई बुझाएका छन् ।
घुमन्ते चरामा त्यस्तो केही लगाइएको हुँदैन , तर, नम्बर कोड गरिएको रिङ लगाइएको परेवा सरोकारको विषय हो भन्दै अनुसन्धान थालिएको प्रहरी अधिकारीको भनाई छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएसम्म यो परेवालाई हिरासतमा राख्ने जनाएको छ । भारतले यस अघि पनि यस्तो कृयाकलाप गरेको उदाहरण छन् । चरालाई जासुस मानेर यस अघि पनि अनुसन्धान नगरिएको होइन । २०१५ मा यसैगरी मन्वाल गाउँमा परेवा भेटिए पछि यसरी नै अनुसन्धान गरिएको थियो । त्यस चरामा पनि उर्दूमा केही सन्देश तथा नम्बर समेत लेखिएको स्ट्याम्प लगाइएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा त्यसमा पनि कुनै प्रमाण भने फेला परेको थिएन । तर, प्रहरीले हिरासतमै राखेर यस चरालाई ‘शंकास्पद जासूस’ भन्यो ।